ရင်ထဲမှာ ဆူးတစ်ချောင်းတော့ဆူးနေတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » ရင်ထဲမှာ ဆူးတစ်ချောင်းတော့ဆူးနေတယ်	9
- Foolish Girl
Posted by Foolish Girl on Sep 1, 2016 in My Dear Diary |9comments
ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေစဉ်းစားပြီး အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးလမ်းဆိုတာကို ရွေးချယ်ခဲ့/ ပြုလုပ်ခဲ့တာပဲ
အကောင်းဆုံးမဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် အညံ့ထဲမှာ မပါဘူးလို့ထင်ခဲ့တာပဲ
လုပ်သမျှကအရာမထင်တော့လည်း အားတွေယုတ်လာတယ် / အသားတွေတုန်လာတယ်
မချီးမွမ်းရင်နေကြပါ / မရှုံ့ချပါနဲ့
ကြိုးစားပြီးလုပ်ဆောင်နေတာကို တော့ အသိအမှတ်ပြုပေးပါ / မြင်ကြည့်ပေးပါ
ငါ့တဘို့တည်း အတွက် တော့ ငါဘယ်အရာမှမလုပ်ဆောင်ခဲ့တာတော့အမှန်ပဲ
အေး လူဆိုတာအတ္တအသမား ဒီတော့
ငါ လုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေမှာ ငါ့အတွက်ဆိုတာမပါဘူးလို့တော့မဆိုလိုခဲ့ပါဘူး
အိပ်မနေဘူး ၊ ထိုင်မနေဘူး ၊ ရပ်မနေဘူး ၊ သွားနေတယ် ရွေ့နေတယ်လို့တော့ထင်တာပဲ
ဒါကိုအိပ်နေတဲ့သူက “နင်ကရှေ့ကိုမရောက်တော့ဘူး အိပ်နေတဲ့ငါနဲ့ အဆင့်တူတူပဲ”လို့ပြောလာတော့လည်း
နှုတ်ခမ်းတစ်ခြမ်းမဲ့ပြီး ပြုံးရုံလေးသာတတ်နိုင်ပါတယ် ငါအဲဒီလောက်ညံ့ဖျင်းနေသလားပေါ့
ဒါပေမယ့် အရှေ့မရောက်လို့ အဆင့်တူတူပဲဆိုရင်တောင်
About Foolish Girl
C K has written 54 post in this Website..
View all posts by Foolish Girl →	Blog
Thint Aye Yeik says: တတ်စွမ်းသလောက် ကြိုးစားနေပါလျက်နဲ့ အရာမထင်သူက…
ဘာကြိုးစားအားထုတ်မှုမှ မရှိလို့ ဘာမှအရာမထင်သူထက်တော့ သာပါတယ်လေ…။
ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် အားထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကို…. နောင်တတော့ ကင်းနိုင်ပါသေးတယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 236
Foolish Girl says: ဟုတ်တာပေါ့နော် အားတက်သွားပါပြီ :D
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 115
Tawwin Pan says: ကိုယ်တွေဆို ဟိုမရောက်ဒီမရောက် လိုင်းကြောင်နေပေ့ါ….
kai says: ပုဇွန်ဦးနှောက်လေးနဲ့ ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေစဉ်းစားပြီး လုပ်လည်း မဖြစ်ဖူးထင်တာပဲ..။
လူဦးနှောက်ဆီတဆင့်တက်လိုက်လေ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 236
Foolish Girl says: ဟုတ်ပ ဗျာ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: ဘာပြောပြောလုပ်နေသူကအတွေ့အကြုံသစ်တွေရနေတာတော့အမှန်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 997
kotun winlatt says: ခရီးများဆုံးထိ လျှောက် . . .
လမ်းဆုံးဟာ ခဏလေးပါ . . .။
ကိုလေးဖြူသီချင်းလေး သတိရသွားလို့ . . .
လုံမလေးမွန်မွန် says: အင်း.. သူများပြောတာကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာသာ ဆက်လုပ်ပါ ဆိုတာက ပြောတာသာလွယ်တာ.. တကယ်တမ်းကျ အတော်ခက်တယ်…
ဒါပေမယ့်လည်း တတ်နိုင်သလောက်တော့ သူများကို ဂရုမစိုက်ပါနဲ့လေ… အရမ်းပင်ပန်းတယ်…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အလုပ်က ပညာသင်ပေးတာ။ လုပ်ရင်းနဲ့ တတ်သွားရော။
Comments By Post"ေ ကာက်ရိုးမီး" - aye.kk - weiweiကျွန်တော်နဲ့ Dead Body(0:2) - ko six - ဇီဇီကျွန်တော်နဲ့ Dead Body (0:1) - ko six - ko sixဘာရယ်ဟုတ်ဘူး... - ဇီဇီ - Thint Aye Yeikနေ့ ချင်းပြန်သွားလို့ရတဲ့ အေးချမ်းလတ်ဆတ်မှုကိုအပြည့်အ၀ခံစားရမယ့် ရွှေပြည် - Thint Aye Yeik - ko sixမြေပုံထဲမှာ မပါချင်တဲ့လမ်း - Thint Aye Yeik - kaiမတူညီသော အတွေးအမြင်များ - ko six - ကျော်လွင်ဖြိုးအဝင်ကော - ko six - Mr. MarGaအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇ - ko six - kaiအားနာလွန်းလို့ ပါ - ko six - တောတွင်းပျော်သူမတူတဲ့ မိန်းမသားများအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် - surmi - ဦးကြောင်ကြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံလေး...လာအိုသို့ - Tawwin Pan - Foreign Residentအေးခဲနေသောအနောက်နိုင်ငံကနိုင်ငံများ........... - Tawwin Pan - Thint Aye Yeikချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား - aye.kk - ဇီဇီဇလုံတောင်ဘုရား မရောက်ဖူးသေး သူများနှင့် ဘုရားသမိုင်း - ဦးကြောင်ကြီး - သျှားသက်မာန်ရေတွေကနိမ့်ရာကနေ မြင့်ရာကိုစီးဆင်းနေတဲ့နေရာ - Thint Aye Yeik - Mr. MarGaဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမယ့် ၂၁ရာစု၏တိုးတက်လာသော အသုံးဝင်နည်းပညာများ - ဦးကြောင်ကြီး - သျှားသက်မာန်ကဗျာဆန်ဆန်လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့...ကဗျာဝကမ်းခြေ (or) အပျိုစင်ကမ်းခြေ - ဦးကြောင်ကြီး - သျှားသက်မာန်"ပြည့် " - Thint Aye Yeik - aye.kk" ဟိုမှာဒီမှာ " - Thint Aye YeikPromotion လေးတွေလာပါပြီ............................... - Foreign Resident - Thint Aye Yeikဖုန်းတွေ၊နာရီတွေပေါ်မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့(11:11)ရဲ့အဓိပ္ပါယ် - Mr. MarGa - Mr. MarGaကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကိုနေ့ ချင်းပြန်စရိတ်ငြိမ်းနဲ့ သွားကြမယ် - kai - etoneကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ၈ ဦး - kai - ko sixခရီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကို လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ထုတ်ပိုးနိုင်ဖို့ သိထားရမယ့် အချက် (၁၅) ချက် - သျှားသက်မာန် - Thint Aye YeikMarijuana - ဆေးခြောက် - kai - ဇီဇီစာပေတိုက်ပွဲခေါ်သံ(၃)- အနုပညာလွတ်လပ်ခွင့် - Thint Aye Yeik - ko six''ဤ''ကို ခပ်လွယ်လွယ်--ကျွဲချင်သူတွေ များလွန်းတော့လည်း... - Thint Aye Yeik - ဇီဇီCategory	Arts & Humanities